အဖြစ်အပျက်သည် မက်ချက်စတာ ဂီတ၏ ကြီးမားသည့် လွှမ်းမိုးမှုခံခဲ့ရသည်။ Madchester တီးဝိုင်းအများစုသည် baggy နှင့် vice versa ဟုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Baggy သည် psychedelia နှင့် acid house လွှမ်းမိုးခဲ့သည် ဂီတပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး မကြာခဏာ funky drummer beat မ ...
Bakersfield sound သည် ၁၉၅၀ အလယ်မှ နောက်ပိုင်းတွင် California, Bakersfield တဝိုက်မှ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာသော country ဂီတအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Bakersfield country ၏ ထုတ်လုပ်မှုကို ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် ကြိုးတပ်တူရိယာများအသုံးပြုသော Nashville sound သည် ...
Baroque pop သည် Chamber pop/ rock နှင့်အတူ အပြန်အလှန်အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပြီး pop rock ဂီတ၏မျိုးခွဲဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှ စတင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ Baroque သည် ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်းတွင် အောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးရောက်ခဲ့သည်။ ...
Blackgaze သည် heavy metal ဂီတ၏ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ခုနှစ်တွင် black metal နှင့် shoegazing တို့မှ ဖွံဖြိုးလာခဲ့သော အနုပညာလက်ရာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Deafheaven နှင့် Boss-de-Nageတီးဝိုင်းများသည် blast beat drumနှင့် high-pitched screamed vocal မျ ...
Bluegrass ဂီတသည် အမေရိကန်ဂီတဇစ်မြစ်မှ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး country ဂီတနှင့် ဆက်စပ်သော အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Appalachia ဂီတလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Bluegrass သည် အိုင်ယာလန်၊ စကော့တလန်၊ ဝေလနှင့် အင်္ဂလိပ်ဇစ်မြစ်မှ ရောနှောထားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Jazz ...
Britpop သည် rock နှင့် pop ဂီတ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်မှ စတင်ခဲ့သည်။ britpopသည် ၁၉၉၀အစောပိုင်းတွင် British independent music မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး တီးဝိုင်းများသည် ၁၉၆၀နှင့် ၁၉၇၀ ၏ British guitar pop music ၊ ၁၉၈၀မှ indie rock တို့ဖြင့် လ ...
Bro-country သည် mainstream ဂီတ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၂၁ရာစု၏ ဒုတိယဆယ်စုနှစ်တွင် စတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၂၁ရာစုတွင် country ဂီတအပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့သော hip hop၊ hard rock နှင့် electronic ဂီတ၏ပုံစံများမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ bro-country သီချင်းအများစုသည် င ...
Cello rock နှင့် cello metal သည် rock ဂီတ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဝိသေသလက္ခဏာများမှာ cellos primary instruments အနေဖြင့် ယှဉ်လျက် traditional rock instrument electric guitars, electric bass guitar နှင့် drum set နေရာတွင် အသုံးပြုကြသည်။ Cello အုပ ...
Celtic ဂီတ သည် ကျယ်ပြန့်လာသော ဂီတအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အနောက်တိုင်းမှ celtic လူမျိုးတို့၏ ရိုးရာဖြစ်သော folk ဂီတထဲတွင် ပါဝင်သည်။ ရိုးရာဂီတသို့ ရည်ညွန်းပြီး မှတ်တမ်းတင်ထား သော ပုံစံများသည် ကပြားပုံစံထဲတွင် ပါဝင်သည်။
Celtic punk သည် celtic ဂီတနှင့် punk rock ကို ရောစပ်ထားသည် ဤအမျိုးအစားသည် ၁၉၈၀ တွင် The Pogues တီးဝိုင်းကြောင့် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ လန်ဒန်မှ punk ဂီတသမားများဖြစ်ပြီး သူတို့သည် အိုင်ယာလန်မှ အမွှေအနှစ်များကို ချီးမွမ်းခဲ့ကြသည်။ Celtic တီးဝိုင်းများသ ...
Chicano rock သည် rock ဂီတတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ချီကာဂို ယဉ်ကျေးမှုမှ ဆင်းသက်လာသည်။ မက်ဆီကန် အမေရိကန် အုပ်စု သို့မဟုတ် ဂီတတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ chicano rock သည် ကျယ်ဝန်းသည်။ ထိုအုပ်စုများထဲမှ တစ်ချို့သည် စပိန်ဘာသာစကားအသုံးမပြုကြချေ။ လက်တင်တူရိယာများနှင့် အသ ...
Christian alternative rock သည် alternative rock ဂီတ၏ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး စာသားဆိုရာများမှာ ကမ္ဘာ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဆင်ခြင် သုံးသပ်ချက်ကို အခြေပြုထားသည်။ ဝေဖန်သူအချို့သည် contemporary Christian music နှင့် Christian rock ကဲ့သို့ မဖြစ်နိုင်ဟု ဝေဖန်ထားသ ...
﻿ Christan punk သည် စိတ်ပါလက်ပါဖြစ်သော ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်အတူ punk rock ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးနှင့်ခရစ်ယာန်ဂီတ၏ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မျိုးခွဲများ၏နယ်နမိတ်အပေါ် သဘောတူညီမှုကွဲပြားမှု အားမလျော့ဘဲ ဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ Christian punk ၏ ခရစ်ယာန်ဂီတ စက်မှုဇုံနှင ...
College rock သည် ၁၉၈၀တွင် အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါရှိ student – run university နှင့် college campus radio station များတွင် alternative rock ကို လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ commercial radio stations များတွင် mainstream rock ကို ရှောင်ခဲ့သော ကျောင်းသားများ မကြာခဏဖ ...
Country pop သည် country ဂီတနှင့် pop ဂီတတို့၏ မျိုးခွဲဖြစ်ပြီး country အမျိုးအစားမှ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ country သီချင်းများသည် အမျိုးအစားပုံစံများကို အသုံးပြုထားပြီး pop ဂီတထဲတွင် တွေ့ရှိရသည်။ county ဂီတစက်မှုဇုံသည် နားထောင်သူများအကျိုးသက်ရ ...
Country rap သည် country ဂီတကို hip hop ပုံစံ rapping များရောနှောထားသော ကျော်ကြားလာသော မျိုးခွဲဖြစ်ပြီး hick-hop rural rap ဟုလည်းသိကြသည်။ Country rap သည် Bubba Sparxxxနှင့် ထုတ်လုပ်သူ Shannon "Fat Shan" Houchins က Spaxxx ၏ ၂၀၀၁ တွင် Dark Days, Bri ...
Cowpunk country punk သည် punk rock ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၈၀ အစောပိုင်းတွင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ စတင်ခဲ့သည်။ punk rock New Wave ကို country music, folk music နှင့် blues ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ် ...
Crossover thrash သည် thrash metal နှင့် hardcore punk တို့၏ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ထိုအမျိုးအစားများကို အတူတကွ ရောစပ်ထားသည်။ heavy metalနှင့် punk rock တို့ကြားထဲတွင် တည်ရှိသည်။ အခြားအမျိုးအစားများသည် crossover thrash နှင့် ထပ်လျက်ရှိကြသည်။ tradit ...
Crust punk သည် anarcho-punk, hardcore punk နှင့် extreme metal လွှမ်းမိုးမှုတို့မှ ဂီတပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤပုံစံသည် ၁၉၈၀အလယ်တွင် အင်္ဂလန်မှ ပေါ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သီချင်းစာသားများသည် နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးမကောင်းမြင်ဝါဒဖြင့် ရေးထားခြင်းဖြစ် ...
Dance-punk သည် ဂီတအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၇၀နောက်ပိုင်းတွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ post-punkနှင့် new wave လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။
Darkcabaret သည်cabaretဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုနှင့် အကြောင်းအရာများ ရိုးရှင်းစွာတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပျက်ဆီးဆုတ်ယုတ်ခဲ့သော cabarets, burlesque နှင့် vaudeville နှင့် ၁၉၇၀ ခုနှစ် goth နှင့် punk ဂီတများ၏ အနုပညာရသများကို ဖော်ပြထားသည့် ဂီတအမျိုး ...
Death n roll သည် death metal ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး hard rock ၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သည့် အကျိုးဆက်မှာ မာန်ဖီသံသည့် သီဆိုပုံနှင့် distorted detune guitar riffingများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီ ၁၉၇၀ hard rockနှင့် heavy metal မှ အစိတ်အပ ...
Death growl သည် အဆိုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး death metal ဂီတအမျိုးအစားမှ အဆိုတော်များသီဆိုကြသည်။ heavy metal ၏ အခြားဂီတပုံစံများတွင်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ death growl သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အကျဉ်းတန်သည် ဟုဝေဖန်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ death growl ၏ကြမ်းတမ်းမ ...
Death-doom တစ်ခါတစ်ရံ death/doom, deathdoom တစ်နည်းအားဖြင့် doomdeath ဖြစ်ပြီး heavy metal ၏ ပြင်းထန်သော မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် slow tempoများ၊ အဆိုးမြင်ဝါဒများ doom metal၏ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူ နက်ရှိုင်းသော growling vocalများနှင ...
Deathcore သည် extreme metal ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးတစ်ဖြစ်ပြီး death metal, metalcore နှင့် hardcore punk တို့၏ ဝိသေသလက္ခဏများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ death metal ၏ riff များ၊ blast beat များနှင့် metalcore ၏ breakdowns တို့ဖြင့် ဖော်ပြကြသည်။ deathcore ...
Deathgrind death/grind) death metal နှင့် grindcore တို့ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ porngrind နှင့် goregrind မျိုးခွဲများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ အမေရိကမှ ဂီတသမား Danny Liker က death metal နည်းပညာနှင့် grindcore ၏ ပြင်းထန်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ...
Deathrock သည် punk rock ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး horror အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၁၉၈၀ အစောပိုင်းတွင် အမေရိကန်အနောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
Djent သည် heavy metal ၏ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး traditional progressive metalမှ သွယ်ဝိုက်၍ တိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ djent သည် onomatopoeia ဖြစ်ပြီး ကွဲပြားသော high-gain, distorted palm-muted guitar sound များဖြင့် ဖန်တီးထားပြီး အထူးသဖြင့် Meshuggah ...
Dream Pop သည် alternative rock ၏ မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဤဝေါဟာရသည် ၁၉၈၀နောက်ပိုင်းတွင် Alex Ayulicက သူတီးဝိုင်း A.R.Kane ဂီတကို ဖော်ပြခြင်းဖြင့် ဝေါဟာရထွင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် New York အခြေစိုက် ဂီတသတင်းစာဆရာ Simon Reynold က UKတွင် Shoegazing အဖြစ်အပ ...
Punk rock ၏ဂီတအရင်းအမြစ်တွင် ဂီတာများကို ကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုးအသုံးပြုသော်လည်း synthesizer များကိုလည်း အသုံးပြုသည်။ သို့သော် အလွန်ရှားပါးသည်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကတွင် punk ဂီတသမားများသည် punk ဂီတကိုဖန်တီးရန် synthesizer သို့ ကီးဘုတ်များကို အအသုံးပြု ...
Ethereal wave ကို ethereal darkwave, ethereal goth ethereal ဟုလည်းခေါ်ပြီး dark wave ဂီတ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀ အစောပိုင်းတွင် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်။ UK တွင် gothic rock ကြီးထွားလာခဲ့ပြီးနောက် ethereal 4AD တီးဝိုင်းများ၏ ကိုယ်စားပြုခြင်းခံ ...
Folk punk သည် folk ဂီတနှင့် punk rock ရောစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ ဝေါဟာရသည် ၁၉၈၀အစောပိုင်းတွင် ဗြိတိန်မှ The Pogues နှင့် အမေရိကန် Violent Femmes တီးဝိုင်းတို့ကြောင့် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ folk punk သည် ထိုဆယ်စုနှစ်အတွင်း အောင်မြင်မှုအချို့ ရရှိခဲ့သည်။ ...
Garage punk သည် garage rock နှင့် punk rockတို့ လွှမ်းမိုးထားသော တီးဝိုင်းများ၏ ဂီတဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစား၏ တီးဝိုင်းအများစုကို 60s garage အဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော် ထိုခေတ်အခါက တိကျသော အသံအဖြစ်ပြန်လည်ကူးယူးဖော်ပြရန်မလိုပေ။ garage punk ၏ ဝိသေသလ ...
geek rock dark rock) သည် nerd ဂီတအုပ်စုနှင့်အတူ alternative rock ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ chiptune လွှမ်းမိုးထားသည့် nintendocore မျိုးခွဲဖြစ်ပြီး hip hop ၊ nerdcore နှင့် contemporary folk ၊ nerd-folk ကဲ့သို့ nerd ဂီတ၏ အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်။ Geek ...
Glam punk သည် glam rock ၏ အစိတ်အပိုင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော protopunk ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်စေရန် ဂရုစိုက်ဖော်ပြကြသည်။ ၁၉၇၀ အစောပိုင်းမှ အစအထိ စတင်ခဲ့သည်။ New York Dolls နှင့် Harlots of 42 nd Street တို့ပါဝင်သည်။
Gothabilly သည် ဂီတအကွဲအပြားဖြစ်သော ဂီတထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး rockabilly ၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ မျိုးခွဲဖြစ်သည်။ portmanteau စကားလုံးဖြစ်ပြီး gothic နှင့် rockabilly တို့ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းတွင် the Cramps တီးဝိုင်းတွင် အသုံးပြုထား ...
Gothic rock simply goth) post-punk နှင့် alternative rock ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းတွင် ပုံသွင်းခဲ့သည်။ gothic rock တီးဝိုင်းများသည် English punk rock နှင့် post-punk များ ပေါ်ထွက်ခဲ့ရာမှ ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ PitchFork နှင့် NME အရ ...
﻿ ﻿ Grebo သည် ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းနှင့် ၁၉၉၀ အစောပိုင်းတွင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ယဉ်ကျေးမှုအုပ်စုငယ်ကို ကိုယ်စားပြုထားသော တီးဝိုင်း Pop Will Eat Itself ကြောင့် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး English Midland တွင် ကြီးမားစွာ အခြေခံထားသည်။ လွှမ်းမိုးခဲ့သည့်တီးဝိုင်းမျ ...
Grindcore သည် ပြင်းထန်သော ဂီတမျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ အလယ်လောက်တွင် စတင်၍ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ grindcore သည် ဆူညံသောအသံများနှင့် လေလံသော distorted, down-tuned guitar များ၊ overdriven bass၊ မြန်၍ မြင့်မားသော tempo, blast beat များနှင့် vocal မှာ ...
﻿ Grunge သည် alternative rock ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးပြီး ၁၉၈၀ အလယ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဆီအက်တယ်မြို့မှ ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်း grunge ရွေ့လျားမှုသည် Seattle ရှိ independent record label တွင် လှည့်ပတ်လာခ ...
Gypsy punk သည် ဂီတမျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Romani ဂီတနှင့် punk rock ဂီတမှ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သည်။ punk နှင့် Gypsy ဂီတကို ပေါင်းစပ်ခဲ့သည့် rock အုပ်စုများမှ တစ်ခုမှာ Motherhead Bug ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၀အစောပိုင်းတွင် အသက်ဝင်ခဲ့သည်။ Gogol Bordello တီးဝိုင်း၏ ...
Hard rock သည် rock ဂီတ၏ မရေရာသော ဂီတမျိုးခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး garage, psychedelic နှင့် blues rock တို့ ရွေ့ရှားမှုနှင့်အတူ ၁၉၆၀ အလယ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ စံနှုန်းအတိုင်း ဆူညံသောအဆိုပုံစံ၊ distorted electric guitars, bass guitar, drum နှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ...
Heartland rock သည် rock ဂီတ၏ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုတော် - သီချင်းရေးဆရာ Bruce Springteen, Bob Segar, Tom Petty နှင့် John Mellencamp တို့၏ အောင်မြင်မှုများမှာ စံနမူနာဖြစ်သည်။ blue-collar American ဘဝနေထိုင်မှုကို ရည်ညွန်းထားသည်။ ဖျော်ဖြေမှုထ ...
Honky-tonk အမျိုးအစား၌ တီးလုံးနှစ်ခုနှင့် နောက်ခံတီးလုံး အပါအဝင် စည်းဝါးကျကျတီးခြင်းများပါဝင်သည်။ စတီးဂီတာနှင့် တယောများ အဓိက စိုးမိုးထားသည်။ ပထမဆုံးဂီတအမျိုးအစားကို honky-tonk ဂီတဟုအသိများပြီး piano ၏ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး တေးသွားများနှင့် စည်းဝါ ...
Horror punk သည် gothic နှင့် punk rock တို့ရောစပ်ထားသည်။ ဂီတအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ကြမ်းကြုတ်သောပုံရိပ်နှင့် စာသားများပါရှိသည်။ horror films science fiction B-movies တို့ အပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ဤအမျိုအစားသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် deathrock နှင့် ထပ်ထားသည ...
Indie folk သည် ဂီတအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၉၀တွင် folk နှင့် classic country ဂီတတို့လွှမ်းမိုးထားသည့် indie rock အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဂီတသမားများထံမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ indie folk သည် နားဝင်ချိုလွယ်သော indie5melody များနှင့် folk ဂီတ ၏ acous ...
Indie pop သည် alternative rock ဂီတ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀အလယ်လောက်တွင် United Kingdom မှ စတင်ခဲ့သည်။ ဤမျိုးခွဲသည် ၁၉၈၀ အစောပိုင်းတွင် Postcard Records label မှ စကော့တလန် post-punk တီးဝိုင်းများနှင့် ၁၉၈၀အလယ်မှ UK independent တီးဝိုင်း the ...
Indie rock သည် alternative rock ၏ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ တွင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှ စတင်ခဲ့သည်။ indie rock သည် အမျိုးမျိုးကွဲခြားနားသည်။ မျိုးခွဲသည် indie pop, jangle pop နှင့် lofi တို့ပါဝင်သည်။ ပထမဦးစွာ record label တွင် ဖော်ပြရန် အသုံးပြုခဲ့သည ...
Industrial rock သည် industrial music နှင့် ရောစပ်ထားသော ဂီတအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ industrial rock ကို industrial metal နှင့် မကြာခဏရှုပ်ထွေးကြသည်။ industrial music သည် အစောပိုင်းတွင် post-punk အုပ်စု ပေါင်းထားပြီး Chrome, Killing Joke, Swans, Foetus ...
ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါတို ..